Cabdirashiid Xidig oo si kulul uga jawaabay hadalkii Xildhibaan Jeesow | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Cabdirashiid Xidig oo si kulul uga jawaabay hadalkii Xildhibaan Jeesow
Cabdirashiid Xidig oo si kulul uga jawaabay hadalkii Xildhibaan Jeesow
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya, kana mid ah wafdiga Axmed Madoobe ayaa si kulul ugu jawaabay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo dhowaan ku baaqay in xabsiga la dhigo Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo haatan ku sugan gudaha magaalada Muqdisho.
Xidig ayaa sheegay in eedeymaha uu jeediyey Jeesow ay yihiin kuwo laga bad-badiyey, islamarkaana uu ka muuqdo naceyb gooni ah, sida uu hadalka u dhigay.
“Ma dhahayo beelaha tabanaya waxba kama jirto cabashadooda, hadana in qolo gaar ah la yiraahdo uma qalanto in ay meesha joogto waa naceyb gooni ah.” ayuu yiri Xidig.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Ummadda Soomaaliyeed ay meel ka dhac ku tahay in meel Public ah uu ka hadlo Jeesow, isaga oo ku eedeeyey inuu horey u taageeray wax aan Diinta Islaamka ku habooneyn oo ah in dadka isku jinsiga ah ay is-guursan karaan.
“Jeesow dariiqyada in ay isaga darsamaan ma ahan. Taariikhda Jeesow waxay ahayd in uu isaga dhuunto saxaafada iyo meelaha bulshada isugu timaado, in uu meel public ah ka hadlo meel ka dhac bey ku tahay Ummadda Soomaaliyeed iyo Islaamka oo dhan; inagoo og in uu shaqsiyan taageeray wax aan Diinta Islaamka ku habooneyn oo ah in dadka isku jinsiga ah ay xitaa is-guursan karaan.” ayuu sii raaciyey C/rashiid Xidig.
Hadalka Xildhibaan Xidig oo ka mid ahaa xubnaha mucaaradka ee Jubbaland, balse la heshiiyey Axmed Madoobe ayaa ku soo aadaya, iyada oo uu dhowaan weerarka afka ah Xildhibaan Jeesow uu ku qaaday Madaxweynaha Jubbaland oo hada ku sugan Muqdisho, wuxuuna ka dalbaday Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) inuu xiro.
Previous articleFarmaajo, Deni iyo Axmed Madoobe oo Maanta kulmayo iyo qodobada miiska saaran
Next articleC/kariin Guuleed oo muujiyay walaac ku aadan natiijadii Imtixaanka Dugsiga Sare (Akhriso)